Tokinao · Momba ny mpandray anjara · Global Voices teny Malagasy
Nanomboka nandika tamin'ny 24 Septambra 2007 · 4 Lahatsoratra
Malagasy teraka tao an-tanindrazana, teraka tamin'ny aprily 1982 tao Ankadifotsy – Antananarivo. Lehibe tao Antananarivo hatramin'ny faha-22 taonany. Noho ny fianarana sy ny asa aman-draharaha anefa dia voatery niampita ranomasina. Ankehitriny dia aty Frantsa.
Ireo zavatra nofinofisiko matetika :
* mba ho afaka milalao sy mianatra avokoa ny ankizy rehetra maneran-tany.
* mba tsy hisy intsony ireo matin'ny hanoanana.
* mba ho mpirahalahy tokoa daholo ny firenena rehetra maneran-tany, izany hoe tsy misy miady.
Lahatsoratra farany an'i Tokinao
Bahrain: fiainana milamina anatin'ny fahasamihafàna
Bahrain03 Avrily 2008
Hatrizay hatrizay, efa aman'arivorivon-taonany lasa izay, Bahrain dia tanim-pilaminana izay ifangaroan'ny mponina maro samy hafa finoana, sy fiaviana. Tao amina tanàna tranainy iray, i Ràn'i Kristy (Ar), mpiblaogy iray avy ao Bahrain dia nahita sary iray izay mampiseho fiainana mirindra anatina fahasamihafàna. Fiainana mirindra anatina fahasamihafàna ao Bahrain. I Ràn'i...
Amerika Latina24 Marsa 2008
Sary nalain'i Muna Annahas Amin'ny 20 aprily ho avy izao no hifidy izay ho filoham-pireneny ny Paragoay. Betsaka amin'ireo mpilatsaka ho fidiana manan-danja no mampiasa ny blaogy ho fomba ifandraisana amin'ireo mpifidy, satria ao no ilazàny ny fomba fijeriny ny lafin-javatra iray manokana, ary ao koa no anazavàny ny drafitry...
Iràna22 Marsa 2008
Rosia06 Marsa 2008